Maleeshiyooyinka taageera Trump oo isku diyaarinaya rabshado hadii ay guuleeysato Hillary Clinton - Horn Future
Maleeshiyooyinka taageera Trump oo isku diyaarinaya rabshado hadii ay guuleeysato Hillary Clinton
Washington –Musharaxa madaxweynaha Jamhuuriga Donald Trump ayaa waxa uu ka bilaabay dalka Maraykanka rabsho siyaasadeed, halkaas oo ay soo baxeen qaar ka mid ah maleeshiyaadka “cadaanka” ah ee cunsuriyiinta oo hubeeysan kuwaasoo ku dhawaaqay in aynan ka waaban doonin in ay isticmaalaan hub haddii “Clinton ay xado doorashada,”waxana dhab ahaan qaar ka mid ah ay bilaabeen tababar ku saabsan adeegsiga hubka.
Waxa maleeshiyadan oo isku magacowday “awooda ammaanka ee 3% ” ay isku gu keentay taageerayaasheeda si ay ugu tabo-bartaan sidii ay hubka u qaadi lahaayeen kayn ku taala meel miyi ah oo kamid ah gobolka Georgia iyo sidii ay isku gu diyaarin lahaayeen kacdoon shicib hadii ay dhacdo in ay guushu raacdo musharaxa Dimuqraadiga Hillary Clinton sida uu dabo-galka kusameeyay wargeyska “Mail Online” ee British ka ah.
Wargeyska oo ka faalooday warbixin uu ka qoray doorashada madaxweynaha imika ayaa waxa uu sheegay in ay tahay doorashadii ugu weynayd ee kala qeybisa bulshada muddo tobannaan sano, iyada oo ololaha Trump ee kicinta ah uu dhiirigaliyay xubnaha maleeshiyaadka garabka midig ee taageera ballamaha uu qaaday musharaxa Jamhuurigu in ay banaank si cad ugu soo baxeen.
Trump ayaa waxa uu balan ku qaaday inuu musaafurin doono soogalootiga sharci-darrada ah iyo in uu joojin doono Muslimiinta soo galeeysa Maraykanka,kana dhisi doono deyr soohdinta u dhexeeysa Maraykanka iyo Mexiko.
Wargayska ayaa waxa uu intaa raaciyay in dhowr goor uu ka digay Trump suurtogalnimada in la la xado doorashooyinka,waxana uu ku dhawaaqay suurtagalnimada in uunan aqoonsan doonin natiijada haddii uu ku guuleysan waayo.
Marka lagu maleeshiyada “Ku Klux klan” iyo maleeshiyada “”awooda ammaanka ee 3% ” oo iyaku soo muuqday intii lagu jiray dagaalkii madax-banaanida Maraykanka ee ka dhanka British ka qarnigii 18aad ayaa ka qaybgalayaasha dagaalkan ka dhanka ah guumaystayaashii aynan ka badnayd 3% oo gabigooga ahaayeen caddaan,ayaa dhanka kale waxa soo muuqday imika maleeshiyaad magacyo kala duwan leh sida maleeshiyada”qaybta ilaalada”.
Wargayska “Mail Online” ayaa waxa uu sheegay cabsida ay qabaan dadka cadaanka ah ee ah in madaxweynaha Maraykanka Barack Obama uu mamnuucayo lahaanshaha hubka shakhsiga ah iyo in la yareeyo awoodaha dawladaha hoose ay dhiirri-galisay in ay sameeysmaan maleeshiyooyinka “xagjirka ah garabka midig,” .
Waxaa laga soo xigtay xarumaha cilmi-baadhista ee Mareykanka oo iyaku dabo-gal ku haya “kooxaha xagjirka ah” in ay ku qiyaaseen tirada kooxahan in ay kor u kacday min 42 kooxood sanadkii 2008 ilaa 276 kooxood imika ahaan.
Dhinaca kale, wakaalada wararka ee Reuters ayaa sheegtay in maleeshiyada “Ku Klux klan” ay ku dhawaaqday war ay ku qortay dhawaan wargeyskeega “Saliibiga”in ay taageerayso Trump,iyadoo sheegtay in Maraykanku uu noqday mar kale mid weyn,sababtoo ah wuxuu ahaa dhulkii dadka cadaanka ee Kiristanka ah.
« Gool-hayihii da’da yareeyd ee kooxda haweenka qaranka Gambia oo kamid noqotay dadkii ku qaraqmay badda Mediterranean ka	» Myanmar: ‘Credible’ probe demanded into Rakhine deaths